Wararka Suuqa Kala Iibsiga Maanta: Chelsea Oo Dalab Cusub Ka Gudbineysa Haaland, Man City Oo Heshiis La Gaadhay Jack Grealish Iyo Qodobo Kale
HomeWararka CiyaarahaWararka Suuqa kala iibsiga Maanta: Chelsea oo dalab Cusub ka gudbineysa Haaland, Man City oo heshiis la gaadhay Jack Grealish iyo Qodobo kale
July 24, 2021 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Chelsea ayaa qarka u saaran inay soo gudbiso dalab £ 130m ah oo ay ku dooneyso weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund ee reer Norway Erling Braut Haaland, oo 22 sano jir ah, ka dib markii milkiilaha Roman Abramovich uu u duceeyay inuu sii wado heshiis rikoor ah. (Footballinsider247)
Inter Milan ayaa ugu yaraan 102.5 milyan ginni ka dooneysa Chelsea si ay u hesho weeraryahanka reer Belgium Romelu Lukaku, oo 28 jir ah, haddii ay Blues awoodi weydo saxiixa Haaland. (Metro)
Manchester City ayaa heshiis la gaadhay Jack Grealish waxayna diyaar u yihiin inay 90 milyan oo ginni ugu soo bandhigaan Aston Villa ciyaaryahanka qadka dhexe ee reer England, oo 25 jir ah (Football Insider)
Manchester City ayaa sheegeysa in wararka sheegaya inay heshiis 160 milyan oo ginni ah kula gaareen weeraryahanka Tottenham Harry Kane inay yihiin wax aan jirin. (Manchester Evening News)
Tottenham ayaa ku adkeysaneysa inaysan dooneynin inay iibiyaan 27 jirkaan kabtanka u ah England xagaagan. (Football.london)
Manchester City ayaa heshiis shaqsi ah la gaartay Kane oo isbuucii uu ku qaadanayo £ 350,000, waxaana ay diyaar la yihiin dalab dhan 120m. (dailystar)
Manchester United ayaa rajeyneysa inay si rasmi ah xagaagan Paris St-Germain ugala soo wareegto ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer France Paul Pogba, 28. (Telegraph)
Weeraryahanka reer France Kylian Mbappe, oo 22 jir ah, ayaa u sheegay PSG inuusan dooneynin inuu saxiixo qandaraas kordhin isla markaana uu doonayo inuu ka tago kooxda xagaagan ama kan xiga. (AS)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Rennes ee reer France Eduardo Camavinga ayaa doorbiday inuu u dhaqaaqo Spain ka dib wadahadaladii u dhaxeeyay Manchester United iyo wakiilada 18 jirkaan lagu tilmaamay inaysan aheyn wax dhiiro gelin leh. (Manchester Evening News)
Barcelona ayaa rumeysan in hadii weeraryahanka reer Portugal Cristiano Ronaldo, oo 36 jir ah, uu ka tago Juventus xagaagan, kooxda reer Talyaani dooneyso inay amaah ku qaadato weeraryahankooda reer France Antoine Griezmann, iyadoo dooq u leh inay soo iibsadaan 30 jirkaan. (Sport)
Madaxweynaha Barca Joan Laporta ayaa sheegay in kooxda ay “aad u qiimeyso Antoine” laakiin “waxaa jira suuq loogu talagalay Griezmann” kooxda reer Spainna “way u furan tahay dhammaan soo jeedimaha”. (Goal)
Arsenal ayaan qandaraas cusub u soo bandhigi doonin 30 jirka weerarka ka ciyaara ee reer France Alexandre Lacazette waxayna ku martiqaadeysaa dalabyo ku kacaya 15m si ay u la soo wareegaan rikoorkoodii hore si ay uga caawiyaan inay u dhaqaaqaan 23 jirka Chelsea iyo England Tammy Abraham. (thesun)
Tababaraha Rangers ahna kabtankii hore ee Liverpool Steven Gerrard, oo 41 jir ah, ayaa sheegay inuu “fajacay oo layaabay” in lala xiriirinaayey inuu noqdo tababaraha Everton kahor magacaabista Rafael Benitez iyo rajada noocaas ah “marnaba macquul ma ahan”. (ESPN)
Liverpool ayaa doonaysa in ay heshiis cusub ka saxiixato xiddiga weerarka uga ciyaara ee Mohamed salah oo 29 jir ah mustaqbalka dhaw iyada oo heshiiska xiddiga reer Egypt uu dhacayo ilaa xagaaga 2023. (Liverpool Echo)
Fulham ayaa ku dhow inay 10 milyan oo ginni kula soo wareegto xiddiga garabka uga ciyaara Liverpool ee reer Wales Harry Wilson, oo 24 jir ah (Sun)
Bayer Leverkusen ayaa diiday dalab 30 milyan oo ginni ah oo ka yimid Aston Villa oo ku aadan 23 jirka garabka Jamaica Leon Bailey. (Footballinsider247)
24 jirka weerarka uga ciyaara kooxda Manchester City ee Gabriel Jesus ayaa hogaaminaya liiska ciyaartoyda diirada u saaran Juventus xagaaga. (Calciomercato)
Juve ayaa sidoo kale qarka u saaran inay dib u bilowdo isku daygeeda ay kula soo saxiixaneyso 23 jirka reer Talyaani iyo qadka dhexe ee Sassuolo Manuel Locatelli. (dailymailBoostada)
Wakiilka weeraryahanka reer Argentina Paulo Dybala ayaa wadahadalo kula jira kooxda Juventus si uu heshiis cusub uga saxiixo 27 jirkaan, kaasoo hal sano uga hartay qandaraaskiisa kooxda Serie A ka dhisan. (Calciomercato)
Kooxaha ka dhisan Koonfurta Ameerika ee kala ah Boca Juniors , Flamengo iyo Club America ayaa dhammaantood muujiyey xiisaha ay u qabaan laacibka kooxda Inter Milan ee Arturo Vidal, laakiin 34-jirka khadka dhexe uga dheela Chile ayaa doonaya inuu u ciyaaro hal koox oo kale oo Yurub ah ka hor inta uusan ku laaban Colo-Colo si uu u soo gabagabeeyo waayihiisa ciyaareed. (Gazzetta dello Sport )